Budata Fast IP Changer maka Windows
Budata Fast IP Changer
Budata Fast IP Changer,
Mgbanwe IP ngwa ngwa bụ mmemme ntọala IP adreesị static maka ndị na -akwado sistemụ mkpanaka na ndị na -ere ahịa. Ihe mmemme a, nke na -eme ka ọnọdụ adreesị IP dị mfe, nke na -ebute ya ịdị mkpa iji gbanwee adreesị IP, nweere onwe ya, edekwara ya ka ọ rụọ ọrụ na PC sistemụ arụmọrụ Windows niile.
Ọ ga -amasị m imesi ya ike na e deghị mmemme Fast Change IP nke Metin Yakar mepụtara na ndị ọrụ ụlọ nuche. Dịka m kwuru na mmeghe, nke a bụ obere mmemme nke ndị na -akwado sistemụ nwere ike iji mee ihe mgbe ha kwesịrị ịtọ adreesị IP echekwara ebe ọ bụla ha na -aga, na -enye ha ohere ịnweta ntọala ngwa ngwa kama ịnwe ịhazi ọnọdụ IP static oge ọ bụla. A na -echekwa ntọala ọ bụla emere site na mmemme ahụ nụdị .txt.
Ihe omume a dịkwa nnọọ mfe iji. Mgbe ịpịrị Ndebanye aha ọhụrụ”, windo na -egosi ebe ị banyere nkwụnye (Ethernet), adreesị IP, netmask, ọnụ ụzọ ámá na adreesị DNS. Ị nwere ike jiri aka tinye adreesị IP yana tinye ya na akpaghị aka. Edepụtara ndekọ gị niile nokpuru Ndebanye aha ọhụrụ, yabụ ị nwere ike nweta ha ngwa ngwa.
Fast IP Changer Ụdịdị
Mmepụta: Metin Yakar